Frank Yerby. Mabhuku akanakisa eAfrican American novelist | Zvazvino Zvinyorwa
Frank Jerby yaive yakakurumbira African American munyori, munyori wemanoveli ese zverudo Chemhondoro nhoroondo. Akagara muSpain kubvira pakati pemakore makumi mashanu, akafa muMadrid zuva rakaita sezuva ra 1991. Chokwadi isu tese tine zita rako pamasherufu kumba, saka Ini ndinoongorora mamwe emabhuku ake kurangarira.
2.1 Kana guta rakarara
2.2 Dhiyabhorosi kuseka
2.3 Mukadzi anonzi fantasy
2.4 Mwenga werusununguko
Era yemurungu amai nababa vatema uye akaberekerwa mu 1906 muna Augusta, Georgia. Akatanga kutsikisa mune mamwe emhando yepamusoro magazini emagariro senge Magazini yeHarper, uye akahwina mimwe mibairo. TO yerby anoonekwa semunyori wekutanga wemuAfrica -America kuti vatengese-vatengesi muUnited States. Ndakaenda Kana guta rakarara.
yerby kusiyiwa 1955 mukuratidzira kusarura kwemarudzi munyika yake uye akafunga kuuya España, kwaakagara ndokuenderera mberi nebasa rake rekunyora. Akabata nyaya dzakasiyana siyana uye pakutanga kwema 70s akatora izvo zvechisarura uye nhoroondo yevaranda vemuAfrica munyika yaakabva.
Akamira kunze kweiyo zvakadzama zvinyorwa yemanoveli ake, asi aifarira kusazivikanwa uye haana kumbobvunzurudza. Iye aive iye munyori akatanga iyo iyo Planeta imba yekutsikisa yakatanga. Akafira muMadrid uye akavigwa muguva diki re La Almudena kumakuva, sezvakakumbirwa zvakajeka.
yerby akabudirira uye akazova tenzi wenhoroondo yenhoroondo panguva iyo yanga isati yave yemafashoni. Yavo themes, kunyangwe na kufanofungidzirwa kwekumaodzanyemba kweUnited States pakati pechimurenga neHondo yeVanhu, vanga vari pamusoro kupfuura nguva dzese: hondo ye Peloponnesus, the Agesla French Revolution, Judhiya yaJesu Kristu ... Kunyika yedu akakumikidza mbiri mbiri, Kunhuwirira kweHutsvene, paIslamic Spain, uye Una rose kuna Ana María, pane Shanduko.
Kana guta rakarara
Iyo inoverengeka inotanga nemurume akasiiwa pakati nepasina muhukuru Mississippi, anonzi Stefano gava, WechiIrish, anokwanisa kufananidzira zvakakwana mutorwa iyo inosimbiswa muAmerica, inodiwa pamusoro peMexico kana chiItaly. Hapana kana chinhu, uye nerumwe rubatsiro kubva kurombo uye hunyanzvi hwake nemakadhi, anokwanisa kuvaka purazi uye imba hombe kuburikidza naro marudzi ese e zviitiko zvakaumbwa mumutsara wenhoroondo unoenda kubva 1826 pakupera kweHondo Yenyika.
Jean, mwanakomana wemupfumi muridzi wengarava yeMarseille, ari akatsunga anopikisa yenzanga yaanogara. Anokudzwa akavimbisa kuna sisi vake anoyambuka nzira yake uye anobira mudiwa wake. Asi apo jean arikuda kutsiva, anongokwanisa kudanana nehanzvadzi yejinda remuchinda. Panguva imwecheteyo, Jean achave chapupu uye protagonist we Chimurenga iwe wakamirira kwenguva yakareba zvakadaro, asi newewo uchanyadziswa.
Mukadzi anonzi fantasy
Ndiine mukadzi protagonist, inotiudza nyaya yaFancy, musikana ane runako rukuru, njere dzakapinza uye yakasimba yakasimba kuda. Asi kana watarisana ne muchato wakarongwa nekuda kwababa vake, anotiza pamba. Pakusvika pa Augusta, in mhepo yakasviba ya1880, kune vakwikwidzi vazhinji vanouya kudanho, asi Fancy ndiye chete murudo naDare, wauchazoroora mushure mekukunda matambudziko akawanda uye kurwisa kusarura kwakawanda.
Nepazasi pe Hondo yeAmerica yeRusununguko, Yerby anosanganisa pano chokwadi uye nhoroondo nhoroondo se George Washington nevamwe vazhinji vane fungidziro yenyaya inotarisa vaviri ava hanzvadzi Kathy naPolly Knowles. Ose ari maviri, akasiyana hunhu, ari murudo nemurume mumwe chete: Ethan Peji, mutsigiri werusununguko rwevanhu vake uye rwaanoda kufira.
Kathy idiki uyo anotamba nemumwe maererano nezvavanofarira. Asi Polly anotevera Ethan kuburikidza nenzvimbo dzehondo, kumubatsira munjodzi uye kumununura kubva mukufa pane akati wandei, kunyangwe achiziva kuti kana hondo yapera, Ethan ane chokwadi chekutarisa kumashure kuna Kathy.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Frank Yerby. Mabhuku akanakisa eAfrican American novelist